अपराध र राजनीतिलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
अपराध र राजनीतिलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ
गम्भीर तथा जटिल प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको एकाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रमुख हुन्— प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्कर कार्की । ब्युरोले हालैमात्र भारतमा रहेर नेपालमा हत्या, फिरौतीजस्ता अपराधकर्ममा सक्रिय तथा व्यवसायी शरद गौचन एवं एमाले कार्यकर्ता दुर्गा तिवारी हत्याका मुख्य योजनाकार समीरमानसिंह बस्नेतलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ । यसअघि ब्युरोकै टोलीले लामो समयदेखि फरार रहेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गरी जेल चलान गरेको थियो । महानगरीय अपराध महाशाखामा रहँदा उनकै नेतृत्वमा गुन्डा नाइके दिनेश अधिकारी चरीको इन्काउन्टर भएको थियो । अपराध अनुसन्धानमा अब्बल प्रहरी अधिकारी कार्कीसँग नेपालमा संगठित, गम्भीर तथा जटिल अपराध अनुसन्धान एवं त्यसका चुनौतीका विषयमा साप्ताहिकका जनक तिमिल्सिना र भिषा काफ्लेले गरेको कुराकानी:
सीआईबी कस्ता अनुसन्धानमा केन्द्रित छ ?
सीआईबी नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत अनुसन्धान एकाइ हो । यो एकाइ विशेष संगठित प्रकृतिका अपराध, ठूल–ठूला फाइनान्सियल क्राइम, साइबर क्राइम, वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध, मानव बेचबिखन आदिमा विशेष केन्द्रित भएर अनुसन्धानमा सक्रिय छ अर्थात् सीआईबी अलि गम्भीर प्रकृतिका अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित छ ।
आफू सीआईबी प्रमुख भएर आएपछिको मुख्य उपलब्धि केलाई मान्नुहुन्छ ?
नयाँ खालको आर्थिक कारोबार बिटक्वाइनमाथि अप्रेसन भयो । वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध एवं संगठित अपराधहरूमा विभिन्न प्रगति भएका छन् । अदालतले फरार तोकेका हाइप्रोफाइल अभियुक्तहरू पनि कानुनी दायरामा आए । त्यसबाहेक हामी केही फाइनान्सियल क्राइममाथि पनि अनुसन्धान गर्दैछौं । हामीले ०७३ सालको सुरु र अन्तिममा बुटवल तथा ०७४ तिर काठमाडौंमा भएको हाइप्रोफाइल हत्यामा फोकस गर्‍यौं । सीआईबीले आर्थिक अपराधसँग जोडिएका ४०/५० अर्बको केस हेरिसकेको छ । विभिन्न जेलमा परेका मानिसहरूलाई फैसला कार्यान्वयनको हिसाबमा हेर्ने हो भने एक हजार वर्षभन्दा बढी जेल फैसलाको कार्यान्वयन भएको छ भने ५/७ अर्ब रुपैयाँ रिकभर समेत भैसकेको अवस्था छ ।
नेपालमा जटिल तथा गम्भीर अपराध अनुसन्धानका चुनौती के–कस्ता छन् ?
संगठित र जटिल अनुसन्धानका चुनौतीहरू धेरै छन् । संगठित अपराधमा हामीले धेरैतिर अनुसन्धान गर्‍यौं, अवैध सुन कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्‍यौं । संगठित अपराधमा सिधै देखिने र भेटिने प्रमाण हुँदैनन्, नेक्सस, कनेक्सन तथा कारोबार आदिबाट त्यो कुरा अदालतमा पुष्टि हुने हो । त्यही किसिमको कानुन र त्यहीअनुसार फैसला आयो भने हामीलाई पनि आनन्द आउँछ ।
यस्ता अपराधमा संलग्नहरू पहुँचवाला हुन्छन् भनिन्छ नि ?
संगठित अपराधमा लागेका मानिसहरूले विभिन्न खेमाका वरिष्ठ व्यक्तिहरूसम्म पहुँच पुर्‍याएका हुन्छन्, प्रहरीतर्फ पनि केही होला । न्याय सम्पादन गर्ने पक्षमा सोझै केही नगरे पनि प्राइभेट वकिलहरूको सहयोगमा फुत्किन सक्ने ठाउँहरू धेरै राखेका हुन्छन् उनीहरूले, त्यही भएर त संगठित अपराध भयो । संगठित अपराध भनेको ह्वाइट क्राइम पनि हो, त्यसमा प्रमाणको भार पुर्‍याउन ठूलो चुनौती हुन्छ ।
ह्वाइट क्राइममा राजनीतिक दबाब तथा संरक्षणको चर्चा पनि हुन्छ । के स्थिति बाहिर चर्चा भएजस्तै छ ?
हामी सबै यही समाजकै हौ । राजनीतिक व्यक्तित्वको घेरा ठूलो हुन्छ, उनीहरूसँग जसको पनि पहुँच सहज, राम्रो, चाँडो र छोटो हुन्छ । अझ चुनावका बेला त मानिसहरू झन चाँडै उनीहरू कहाँ पुग्ने भए, त्यो भएर पहुँच स्थापित सहज रूपमा हुन्छ । यही कारणले राजनीतिक व्यक्तित्व तथा उनको घेरामा लागेका मानिसहरूले कुनै केसमा सोधीखोजी गरेको खण्डमा हामीले पनि उचित किसिमले त्यसको रेस्पोन्स दिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि त्यसो भन्दैमा हामीले त्यसलाई इन्फ्ल्युएन्स भन्न मिल्दैन । अबको पुलिसिङमा क्रिमिनल पार्ट र पोलिटिकल पार्टलाई फरक गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । पोलिटिकल पाटो भिन्दै हो, त्यसमा हामीलाई कुनै सरोकार छैन । अनुसन्धानलाई त्यति जटिल बनाउनु हुँदैन, अनुसन्धानलाई सिम्पल घेरामै राख्यो, क्राइमसँग मात्र जोड्यो भने सबै कुरा सल्टिहाल्छ । राजनीतितिर
जानै पर्दैन ।
अपराधकै दुनियाँमा रहेकाहरू पनि अहिले पोलिटिकल लिडरसिप लिने बाटोमा छन् । त्यसले अनुसन्धानमाथि चुनौती बढाउँदैन र ?
यसमा मेरो भन्नु खासै केही छैन, किनभने सिस्टमले दिएको अधिकार सबैले प्रयोग गर्न सक्छन् तर, जोसुकै भए पनि यदि कोही क्राइममा संलग्न छ भने उनीहरूलाई सीआईबी र नेपाल प्रहरीले हेरिरहेको छ । कोही कुनै पदमा छ भन्दैमा उ अनुसन्धानको दायराभन्दा माथि हुन सक्दैन ।
प्रहरीले लामो अनुसन्धानपश्चात सफलता हात पार्छ । विदेशबाट पक्राउ गरेर अभियुक्तलाई बल्लतल्ल नेपाल ल्याएर अदालतमा उपस्थित गराउँछ । त्यसपछि उक्त अभियुक्त केही हजार धरौटीमा छुट्छ, यसले अनुसन्धानलाई कति प्रभावित गरिरहेको छ ?
सम्मानित अदालतको कामकारबाहीमा टिकाटिप्पणी गर्ने अधिकार हामीलाई छैन र गर्नु पनि हुँदैन । यद्यपि कुनै—कुनै अनुसन्धानमा हाम्रो कन्सन चाहिँ छ । संगठित अपराध वा अरू कुनै पनि अनुसन्धानमा ठ्याक्कै सबै प्रमाण पुग्दैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण, मनी लोङडिङ तथा संगठित अपराधमा कानुनअनुरूप ठ्याक्कै प्रमाण नपुग्ने हुन्छ तर नेक्सस–कनेक्सन जोडिने पाटोमा गएर अनुसन्धान भएका हुन्छन् । हाम्रो काम अपराध र अपराधीलाई जोड्ने हो, प्रमाणको भार पुर्‍याउने हो । सम्मानित अदालतबाट हुने फैसलामा हाम्रो कमेन्ट छैन् ।
कतिपयले यसमा प्रहरीले हतार गर्छ भन्छन् नि ?
सीआईबीको हकमा त्यस्तो छैन किनभने, सीआईबीमा केसहरू बिस्तारै आउँछन्, हामी गहिरो अनुसन्धान गर्छौं । अनुसन्धानको सिलसिलामा अभियोजनको पाटो महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट पूरा गरिन्छ । त्यहाँबाट सीआईबीको डकुमेन्टेसन, अनुसन्धान गर्ने बाटो प्रशंसनीय छ, उदाहरणीय छ भनेर हामीले बेला–बेलामा प्रतिक्रिया समेत पाइरहेका हुन्छौं । हतार गर्ने भन्ने जुन कुरा छ, यसमा मेरो पनि कन्सन छ । सीआईबी वा नेपाल प्रहरीले अथक प्रयास गरेर अनुसन्धान गरेको कुरा सफल होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ । यही कारण हामी बेला–बेलामा महान्याधिवक्ताको कार्यालय (सरकारी वकिल) पुगेर श्रीमान्हरूसँग पनि अन्तक्र्रिया गर्छौं । त्यसबाट हामी केही सिकेर त्यहीअनुसार केस दह्रो बनाउनेतिर लाग्छौं । कतिपय केस विशेषमा सरकारी तवरबाट आएको गाइडेन्सलाई अक्षरश: फलो गर्छौं ।
अन्डरवल्र्ड शैलीमा क्राइम र्‍याकेटको अभ्यास गरिरहेका समीरमानसिंह बस्नेत कसरी पक्राउ परे ?
अपराध महाशाखामा हुँदा पनि मैले यस्ता तत्वहरूलाई तह लगाएको थिए । अपराधका पाटाहरू धेरै हुन्छन्, जब अर्थसँग अपराध जोडिन्छ । अपराध जोडिनेबित्तिकै संगठित अपराधको फाइनान्सियल स्रोत के हो, गुन्डागर्दी उब्जिने अपराधमा संलग्नहरूको आम्दानीको स्रोत के हो, त्यो स्रोतमा उनीहरू कसरी खेल्छन् भन्ने पाटो खोतल्न जरुरी हुन्छ । अर्को पाटो उनीहरूको पहुँच हेर्नुपर्छ । संगठित अपराध तथा गुन्डागर्दी गर्नेहरूको प्रहरीमा कस्तो पहुँच छ, अरू सरकारी निकायमा कस्तो पहुँच छ, अदालतदेखि अन्य शक्तिकेन्द्रहरूमा कस्तो पहुँच राख्न सक्छन् भन्ने कुराको आँकलनचाहिँ प्रहरीले गर्नुपर्छ । उनीहरू जहिले पनि राजनीतिक दलहरू, शक्ति केन्द्रहरूसम्म आफ्नो पहुँच पुर्‍याउन चाहन्छन् । उनीहरूलाई बीचमा बचाइदिने एउटा मान्छे हुन्छ अथवा उनीहरूका लागि बोलिदिने मानिस हुन्छ । त्यस्ता मानिसहरू प्रहरी, न्यायालय वा राजनीतिक दलसँग निकट हुन्छन् । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा यस्ता मानिसहरू प्रयोग गरिएका हुन्छन् । यतिसम्म कि सञ्चारकर्मीलाई समेत उनीहरूले प्रयोग गरेको हामीले पाएका छौं । त्यसबाहेक सीमा बाहिरका मानिसहरूसँगको सम्पर्क पनि प्रयोग भएको पाइन्छ । सूचना–प्रविधिमा पहुँच भएको पाइन्छ । संगठित अपराधमा लाग्नेहरूले आफ्नो पहुँच जहाँ पनि विस्तार गर्न खोज्छन् । त्यो पहुँचलाई कसरी छोट्याउने भन्ने काम प्रहरी को हो । अझ विशेष गरी सीआईबीको हो ।
समीरमान पक्राउ गर्न सक्नु प्रहरीको एउटा ठूलो सफलता त हो नि होइन ?
यसलाई सफलता नै मान्नुपर्छ, यसमा हामीले प्रसस्त मेहनत गर्नुपर्‍यो । यसमा ठूलो टिमले धेरै समय लगाएको छ तर, हामी यतिकैमा अड्किंदैनौ । किनभने यस्तै किसिमको अपराधको अर्को पाटोस्वरूप काठमाडौंमा विगत १/२ वर्षयता ठेक्का–पट्टासम्बन्धी गुन्डागर्दी बढिरहेको छ । यो विषयमा हामीले आन्तरिक रूपमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेका छौं । हामीले कसरी अघि बढाउने भनेर पनि तय गरिसकेका छौं । यसरी गुन्डागर्दीलाई प्रश्रय दिने र ठेक्का–पट्टामा रकम छुट्याउने भागबन्डा र अंशबन्डा गर्ने कुराले अपराधलाई बढवा दिन्छ । यी कुरा रोक्न हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
गौचन हत्यालगायतमा अरूको नाम पनि आएको छ नि ?
यसमा अरू पनि संलग्न छन् र हामी तिनीहरूलाई चाँडै नै गिरफ्तार गर्छौं । ठेक्का–पट्टा मिलाएर यति रकम भनेर कबोल गरिएका घटना पनि छन् । जस्तो तीन अर्वको ठेक्कामा ३० करोड गुन्डालाई बाँड्ने गरी हुने सहमति मान्य हुँदैन । यसबाट गुन्डागर्दीले मौलाउने ठाउँ पाउँछ भने काम पनि गुणस्तरीय हुँदैन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग हो यो । सम्बन्धित निकायसँग हामीले कुरा पनि गरिरहेका छौं । यस विषयमा थप रहस्य खुल्दैछ ।
यिनीहरूका आर्थिक हाँगाबिगा बलिया देखिन्छन् नि ?
हामीले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने संगठित अपराधबाट जसले पैसा आर्जन गर्छ, तिनीहरूलाई जेल पठाएर मात्र हुँदैन्,उनीहरूको गोजी पनि रित्याउनुपर्छ । यो संसारभरि प्रयोग भएको कुरा हो । अमेरिकालगायतका ठूला–ठूला देशमा त्यसरी कमाएको पैसा उनीहरूको गोजी रित्याएर सरकारी कोषमा राखिन्छ । जबसम्म गोजी रित्याइँदैन त्यो मान्छे दुई चार वर्ष जेल बस्छ अनि बाहिर आउँछ, फेरि राम्रो गाडी चढ्छ, राम्रो घडी लाउँछ, अनि फेरि त्यही व्यवसाय गर्न थाल्छ ।
संगठित अपराधमा संलग्न सवैको सम्पत्ति राज्यले लिनुपर्छ हो ?
तिनीहरूको गोजी रित्याउनुपर्छ यो स्थापित सिद्धान्त हो । संगठित अपराधलाई काउन्टर गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेकै सबै सम्पत्ति राज्यले लिने नै हो ।
अनुसन्धानमा प्रविधिका कारण चुनौतीहरू थपिँदै गएको देखिन्छ । त्यसलाई चिर्न राज्यबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
राज्यले गर्ने भनेको नेपाल प्रहरीको सशक्तीकरण नै हो । अनुसन्धान त्यसै पनि खर्चिलो हुन्छ किनभने एउटा सानो घटना घट्यो भने पनि त्यहाँ धेरै प्रहरी पुग्नुपर्ने हुन्छ । इन्धन, फोन आदिको प्रयोग प्रशस्त भएको हुन्छ । साधनहरूको प्रयोग भएको हुन्छ । अनुसन्धान गर्दा विभिन्न सूचना चाहिन्छ ती सूचना पनि सित्तैंमा आउँदैनन् । इन्टेलिजेन्स इन्फरमेसनका लागि पैसा त अनिवार्य नै चाहिन्छ । ती सबै कुरामा लगानी हुनै पर्छ । त्यसका साथसाथै नेपाल प्रहरीको व्यवसायिक कार्यशैलीलाई पनि अझ विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
टोले गुन्डाहरूलाई समयमै नियन्त्रण नगरेर प्रहरीले नै पुलपुल्याएर डनसम्म पुर्‍याएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ नि ?
केही हदसम्म प्रहरीबाट भएको छ भने हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ तर नेपाल प्रहरी विगत १०/१५ वर्षदेखि केही फरक पुलिसिङमा देखिएको त मिडियाहरूबाट समेत आइरहेको कुरा हो । यो अनुभव म आफैं पनि गर्छु किनभने मैले जागिर खाएको पनि २५/२६ वर्ष भैसक्यो । पछिल्ला १५ वर्षदेखि पुलिसको डाइमेन्सन राम्रो देखिन्छ तर कुनै–कुनै बेला साँच्चैभन्दा संक्रमणकालमा आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसहरूले विभिन्न किसिमका पहुँच र शक्ति केन्द्रका मानिसहरूलाई प्रयोग गरेका हुन्छन् । नेपाल प्रहरी त्यसमा प्रयोग हुनुहुँदैन । अपराधको पाटो फरक हो व्यवसायको पाटो फरक हो त्यसलाई छुट्याइयो भने सहज हुन्छ । कुनै बेला यस्ता मानिसहरूले कतैबाट आशीर्वाद पाएका हुनसक्छन् ।
कतिपय अनुसन्धानमा पोलिटिकल इन्फुलेन्स गर्न खोजिन्छ भनिन्छ, कत्तिको दबाब आउँछ ?
अहिलेसम्म मलाई कसैले पनि दबाब दिएको छैन । कुनै–कुनै केसमा सामान्य के–कसो हो भन्ने सोधीखोजी हुन्छ । पोलिटिकल व्यक्ति भनेको नेतृत्व लिने व्यक्ति हो । उहाँहरूबाट सामान्य सोधखोज गर्नु सामान्य पनि हो तर यसमा यसो गर उसो गर भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन । कानुनसम्मत काम गरेपछि अन्यथा हुने कुरै हुँदैन । राजनीतिक संरक्षणमा अपराध हुन्छ भन्ने चर्चा धेरै हुन्छ तर हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरूमा सबैका कुरा सुन्ने बानी हुन्छ । सबैको कुरा सुन्दा प्रहरीको पनि कुरा सुनिन्छ । सत्य कुरा यस्तो हो भनेपछि नेताहरू पनि कन्भिन्स हुन्छन् र हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् ।
पछिल्लो समयको अपराध ट्रेन परिर्वतन हुँदै गएको हो ?
अहिले टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर साइबर क्राइम र आर्थिक अपराध हुन थालेको छ । मानव बेचबिखनको रूप फेरिएको छ । इन्टरनेटको पहुँच धेरैमा भएको हुँदा त्यहाँ पनि अपराध छिरेको छ । मानिसको आफ्नै लापरबाहीका कारणले पनि अपराध बढ्दै गएको छ । व्यक्तिगत सुरक्षा भनेको आफूमै भर पर्छ । आफ्नो सुरक्षा गर्ने प्रमुख भूमिकामा आफैंमा हुनुपर्छ । यी कुरामा ध्यान दिइएन भने अपराधको शिकार हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
मानव बेचबिखनको शैली कसरी परिवर्तन भएको छ ?
अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी मानिससँग डिल गरी विदेश लाने भन्दै ठग्ने घटनाक्रम सतहमा आउन थालेका छन् ।
पछिल्ला केही वर्षमा आर्थिक अपराधहरू बढिरहेका छन् । यसको कारण के हो ?
समाज विकासको क्रम, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक वृद्धिदर, बेरोजगारी, प्रकृतिक प्रकोप आदि सबै कारणले मानिसमा अभाव सुरु हुन्छ । बाँच्नका लागि केही उपाय नपाएपछि मानिस अपराधकर्ममा लाग्छ । त्यस बाहेक आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरूले मौका पर्खिरहेको हुन्छन् । त्यो मौका आएका बेला उनीहरू यस्ता अपराध गर्न तयार हुन्छन् ।
चुनावको समयमा धेरै बम आक्रमण भए । के प्रहरी सूचना लिन चुकेको हो ?
खासमा सीआईबी पनि कतै न कतै त जोडिएको हुन्छ तर, यसलाई हेर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत अन्य निकायहरू पनि छन् । विस्फोटन भनेको एउटा स्फेसिफिक क्राइम हो । कहीँ न कहीँ इन्भल्व भए पनि यसलाई हेर्ने छुट्टै निकाय छ । सूचना संकलनको काम प्रहरीको सबै तहले गरिरहेको हुन्छ । अझ यसमा स्थानीय प्रहरी बढी सक्रिय हुन्छ ।
प्रकाशित :मंसिर २६, २०७४
प्रेमीसँग सुतेकी युवतीको रहस्यमय मृत्यु
कपाल खौरेर चुम्बन गर्ने
यौनिक अपराध वृद्धि र कामुक पहिरन
विश्वभरका मोस्ट वान्टेड नेपाली
गहिरो प्रेममा परेको छैन : स्वप्न सुमन पुस ३०, २०७५
अमेरिका नै फर्कनुपर्छ भन्ने छैन पुस २४, २०७५
बल्ल मिस नेपाल भएको अनुभव गरिरहेकी छु पुस ९, २०७५
रेल ग्ल्यामर होइन, आवश्यकता हो पुस २, २०७५
राम्रो प्रहरी हुनुअघि राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ मंसिर १८, २०७५
विवाहका लागि म कसैको पर्खाइमै छु : निरुता सिंह मंसिर १०, २०७५
अमेरिका बसेर समस्या देखाउने भीडको हिस्सा बन्न चाहिनँ मंसिर ५, २०७५
कुन ग्रह भएकाले केमा लगानी गर्दा लाभ प्राप्त गर्छन् ? कार्तिक २०, २०७५
राष्ट्र र राष्ट्रियता नै ठूलो कुरा रहेछ कार्तिक १५, २०७५
कोमल वली–२ पनि हुन सक्छु कार्तिक १४, २०७५